प्रतिगमन विरुद्धको सडक आन्दोलनका सह-संयोजक योगेश नै ओली क्याम्पमा ! - Kantipath.com
प्रतिगमन विरुद्धको सडक आन्दोलनका सह-संयोजक योगेश नै ओली क्याम्पमा !
एमाले नेता एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले नेकपा (एमाले) एकतालाई जोगाउन सकिन्छ कि भन्ने आशाले प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्षविरुद्ध हस्ताक्षर नगरेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको नाम नलिई भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । उनले शुक्रबारलाई जीवनकै सबैभन्दा कठिन दिन भएको समेत बताएका छन् ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले आफूले सहि वा गलत के गरेको भन्ने कठोर मूल्यांकन इतिहासले गर्ने उल्लेख गरेका छन् । यसअघि भने भट्टराई एमाले माधवकुमार नेपाल समूहको प्रमुख नेताको रुपमा परिचित थिए । नेता नेपालका हरेक कदमलाई साथ दिएका भट्टराईले शुक्रबार विपक्षी गठबन्धनमा लाग्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका हुन् ।
यसले माधव नेपाल समूहसमेत विभाजित भएको प्रष्ट भएको छ । ओली संसद विघटन गर्दा प्रतिगमन मुर्दाबाद भन्दै सडकमा हिडेका भट्टराई अहिले ओलीको कित्तामा उभिएका हुन् । ओलीको उक्त कदम विरुद्ध संघर्ष गर्न प्रचण्ड-माधव समूहले बनाएको संघर्ष समितिमा उनी सह-संयोजक थिए । उक्त समितिको संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए भने सुर्य सुबेदी सचिव थिए ।
Previous Previous post: कम्पनीले अक्सिजन नदिंदा सरकारी अस्पताललाई समस्या
Next Next post: क्रान्तिकारीको स्वयंसेवक विभागले ९ गते रक्तदान कार्यक्रम गर्दै